Tartiiba Islaayidii Jijjiiru
Mul'annoo - Toorii fili, islaayidii fili, kana booda islaayidiicha gara iddoo birootti harkiisi.
Mul'annoo - Baratamoo yookin Yaadannoo fili, Heerata Islaayidootarraa durargii islaayidii fili, kana booda durargii islaayidii gara iddoo birootti harkisi.
Islaayidii yeroodhaaf pirezanteeshiinii keetirraa haquuf, gara Fooyaa Islaayidiitti demi, islaayidi mirga-cuqaasi, kana booda, Islaayidii Mul'isi/Dhoksi fili. Lkkoofsi islaayidii dhookatee ni qaxxamurama. Islaayidii mul'isuuf, islaayidii mirga-cuqaasi, kana booda Islaayidii Mul'isi/Dhoksi fili.
Title is: Tartiiba Islaayidii Jijjiiru